Wariye Serjito Oo Lagu Xiray Magaalada Baydhabo – Great Banaadir
Wariye Serjito Oo Lagu Xiray Magaalada Baydhabo
Wariye Maxamed Deeq Cabdiraxiin (Serjito) oo ka hawlgala Magaalada Baydhabo ayaa maanta lagu xiray magaaladaasi.
Wariyaha ayaa waxaa hoygiisa Magaalada Baydhabo ka soo xiray Ciidamada Booliska, isagoona iminka ku xiran Saldhiga Dhexe ee Baydhabo.
Wariye Maxamed Deeq Cabdiraxiin oo la hadlay Universal TV ayaa xaqiijiyay in uu ku xiranyahay Saldhiga Dhexe ee Baydhabo, iyadoo aan wax sabab ahi loo sheegin.
Wariyaha ayaa yiri “Labadii duhurnimo ee maanta (2:00pm) anigoo hurdo ayaa waxaa gurigeyga iigu yimid askar katirsan booliska, oo la’igu wargeliyay inaan xarig ah, anigoo aan la ii sheegin sababta aan ku xiranahay.”
Serjito ayaa yiri “Gurigeyga ayay si qaab darro ah iiga soo kaxeeyeen, iyadoo aan xalay ku dhafray khudbaddii Madaxweyne Lafta-gareen uu ugu talagalay munaasabadda sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii xilka loo doortay. Sidii ayay igu keenayn Saldhiga Dhexe.”
Waxa kaloo uu yiri “Anigoo arkayo ayay ciidamada teleefanka ka waceen Taliyaha Saldhiga, Mukhtaar Axmed Ibraahim (Dugudow) oo markaasi saldhigga ka maqnaa, waxay ku dhaheen oobiga maxaan Wariyaha ugu qoreynaa oo dembi ah inuu ku xiranyahay, wuxuuna ku dhahay ‘Hala hayo bes’ waxba yaan oobiga loogu qorin. Marka meesha waxaa ka cad inaysan jirin sabab la’igu soo xiray oo jirto.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaa layaab leh in xitaa niman Saraakiil oo doonaayay inay i damiintaan laga diiday, oo lagu dhahay ‘Naga raali ahaada’ Wariyaha amar naga weyn ayuu ku xiranyahay.”
Maamulka Koonfur Galbeed iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan weli ka hadlin xariga ninka Wariyaha loogu gaystay Xarunta Gobolka Baay ee Magaalada Baydhabo.
Wariye Serjito ayaa 26-kii bishii August ee sanadkan lagu xiray Magaalada Baydhabo, kadib markii uu wareystay dad dhaliilay shaqada Wasaaradda Haweenka, Xuquuqul Insaanka & Arrimaha Qoyska ee Koonfur Galbeed. Wariyaha ayaana xabsiga laga sii daayay maalmo yar kadib. – UniversalTV Somali